श्रीमानका यी साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती | सुदुरपश्चिम खबर
नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ
जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन ? यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ
अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ? ठा’डो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रिसाएर फोन का’ट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै एकासी झ’र्किने ,रिसा’उने गर्छन भने शं’का गर्नैपर्छ । असल श्रीमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ । यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने , झ’र्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै चक्कर चल्दै छ, जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ ।
अर्को चनाखो हुनुपर्ने प्रश्न हो श्रीमती कतिको चुलबुले छिन् ?
-कुनै जागिर गर्नु हुन्छ या जागिर गर्ने बहाना गर्दै छिन् ? श्रमती चुलबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस् , किन कि महिला हरु जति चुलबुले हुन्छन । उतिनै यौ’न प्यासी पनि हुन्छन् , कुनै जागिर गर्नु भएको छ या छैन । कस्तो खाल्को जागिर हो , जानकारी लिनुहोस् , यहाँ यस्तो पनि देखिनमा आएको छ श्रीमती जागिरमा जाने भन्ने उल्टो आफ्नो पैसो खर्च हुने । यो अवस्था घरबार बि ग्रिएको अवस्था हो ।
अर्को कुरा तपाई विदेशमा गइसकेपछि बेला बेलामा श्रीमतीको मोबाइमा फोन गर्दै गर्नुपर्छ । तपाईलाई थाहै नहुने अर्को नम्बर पो चलाएको छ की यी सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ